Nahoana ny jiro ultraviolet dia ampiasaina amin'ny fanamorana?
Fotoana: 2020-03-31 Hits: 46
Ny hazavana Ultraviolet dia mandray anjara amin'ny famonoana mikraoba haingana sy mahomby amin'ny alàlan'ny fomba ara-batana. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fanimbana ny ADN na RNA ny mikraoba.
Ilaina tokoa ny ampiasaina amin'ny toe-javatra misy fepetra takiana avo amin'ny fahadiovana, satria manafoana ny rafi-pitaterana mikraoba, mampiato azy ireo tsy hitombo, izay loharanon'ny areti-mifindra.
Tamin’ny taona 1877, nisy mpahay siansa anglisy roa nahatsikaritra fa nanjary niva-drano ny rano siramamy napetraka teo ambony varavarankeloka iray, raha mbola mazava kosa ny rano siramamy ao anaty tara-pahazavana.
Notarihin'izy ireo tamin'ny alàlan'ny mikroskopia ny rano ary tsikaritr'izy ireo fa nitombo ny bakteria ao anaty rano malemy, fa tsy amin'ny tara-masoandro. Taorian'ny fikarohana fanampiny dia nanambara izy ireo fa ny taratra ultraviolet dia manana ny heriny amin'ny fitrandrahana.
Taona maro aorian'ny nahitan'ny olona ny endri-javatra antiseptika sy mpamono otrikaretina amin'ny hazavan'ny masoandro mahazatra, dia nanomboka nampiasa ity teknika ity izy ireo.
Tamin'ny 1906, mpahay siansa roa no namolavola fantsona arko voalohany afaka namokatra fahazavana ultraviolet. Tamin'ny 1910, ny mpahay siansa frantsay dia nametraka ny rafitra fantsom-pahavitrihana jiro ultraviolet lehibe voalohany.
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana ny fomba famonoana ny famelezana ultraviolet.
Ohatra, azo ampiasaina amin'ny famonoana ny rivotra, ny famotanana rano, ny aquarium na ny disin-drano ny fitrandrahana, ary koa ny haben'ny fitaovana amin'ny laboratoara, sns. Misy ohatra vitsivitsy hafa voasoratra eto ambany:
Ny famelezana ny hazavana Ultraviolet dia atao amin'ny alàlan'ny fanonganana ny asidra atody sy ny tsy ananana ny ADN sy ny RNA, ka tsy manam-pahefana hanatanterahana ny adidy tena ilaina izy.
Ny fihanaky ny hazavana Ultraviolet dia ampiharina amin'ny fangatahana maromaro, toy ny sakafo, rivotra, ary ny fihanaky rano.
Ny rano sy ny edibles hafa alàlan'ny fanavotana ny hazavana UVviolet maivana dia tsy manova ny tsiro na ny fofon'ireo zavatra ireo satria tsy mitaky zavatra azo ampidirina amin'ireto zavatra ireto. Izy io koa dia mampiato ny fanarenana indray ny zavamiaina bitika toy ny bakteria, mikrôby, olitra, sns.
Ny disinfection ny hazavana ultraviolet dia karazana disinfection haingana sy haingana izay hahitana ny valiny ao anatin'ny minitra vitsivitsy.
Fahalalana mifandraika: Afaka mamono ny virus sy ny bakteria ve ny hazavana ultraviolet?
Ny teknikan'ny famonoana hazavana ultraviolet dia mety ampiasaina ary tsy misy simika takiana.
Tsy mila fandefasana entana, fanarenana na fitantanana ireo simika manapoizina sy manimba. Midika izany fa ny fampifanarahana io teknika fanadiovana sy famafanazana io dia tsy hisy atahorana ho an'ny fiarahamonina manodidina.
Vokany, tsy misy tavela simika sisa tavela taorian'ny fampiharana ny jiro ultraviolet. Tena manampy be dia be amin'ny fanadiovana sy fanadiovana ny fako rehetra ao amin'ny faritany iray, amin'ny fiezahana kely indrindra ary tsy misy simika tandindomin-doza.
Amin'ny alàlan'ny vokatra dia azo aorina rehefa misy otrikaretina mihetsika miaraka amina famonoana efa misy ao anaty rano. Ny fampivoarana ireo vokatra marobe ireo dia mitranga amin'ny alàlan'ny fihetseham-po izay misy ny singa voajanahary.
Fa ny famonoana hazavana ultraviolet dia hetsika tsy misy simika izay tsy manampy afa-tsy ny rano ankoatry ny jiro ultraviolet, noho izany dia tsy misy vokatra vokarina.
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny famonoana hazavana ultraviolet dia tsy manapoizina. Mifanohitra amin'ny simika mafy izay ampiasaina amin'ny fanadiovana sy ny vokatra fanadiovana, ny jiro ultraviolet dia tontolo mahasoa.
Ny famonoana hazavana ultraviolet dia tsy simika ara-batana, fa zavatra ara-batana. Ny disinfection maivana ultraviolet dia azo antoka amin'ny fampiasana amin'ny sakafo ary koa ny serivisy fanomanana sakafo sy ny kojakoja tsy sakafo.
Na dia mety maratra noho ny fahalemen'ny Ultraviolet be loatra aza ny olombelona, ​​ny fiarovana tsara dia mahatonga ity fomba ity ho azo antoka sy tsy misy poizina ho an'ny toeram-pisakafoanana, kafe ary toeram-pitsaboana.
Sahala amin'ny fanafody simika misy poizina amin'ny vokatra fanadiovana, ny jiro ultraviolet dia tsy miteraka fahavoazana, raha toa ny olona mandray ny fepetra raikitra.
Inona ny jiro ultraviolet tsara indrindra?
Araka ny fantatsika rehetra, ny jiro ultraviolet, izay misy 10nm ka hatramin'ny 400nm, dia fahazavana tsy hita maso. Ary ny fiasan'ny jiro ultraviolet dia miankina amin'ny sakelin'ny wavelength.
Ireto manaraka ireto dia ireto telo ireto:
UV-A, 320nm ka 400 nm. Mampahafantatra ny ankamaroan'ny jiro ultraviolet amin'ny tany izy io. Ary mety manimba ny hodintsika sy ny masontsika izany.
UV-B, 280nm mankany 320nm. Afaka mitsabo aretina aretin-koditra. Fa ny fanararaotana be loatra dia hiteraka sunburn ary na ny homamiadan'ny hoditra aza.
UV-C, 200nm mankany 280nm. Tsara indrindra amin'ny fanamitranana izany. Saingy ny fahaizan'ny fitrandrahana azy dia marefo. Alohan'ny hahatongavana amin'ny tany, ny jiro UV-C rehetra dia hoentin'ny rivotra eny amin'ny habakabaka.
Fahalalana mifandraika: Iza amin'ireo jiro UV no tsara indrindra?
Androany, ny ankamaroan'ny fitaovana disinfection ultraviolet dia mampiasa jiro UV-C ho loharanon'ny fahafaha-manavotany azy. Ny jiro UV-C dia vahaolana mahomby amin'ny famindrana otrikaretina, ary izany no antony mahatonga ny karazana hazavana indrindra.
Na izany aza, hiteraka fahavoazana lehibe ihany koa. Raha tsy mitandrina ianao dia afaka miditra amin'ny hoditrao ny hazavana UV-C ary miteraka fahavoazana na ratra. Rehefa mandeha ny fotoana, ny jiro UV-C dia mety hanimba ny plastika sy ny fitaovana vita amin'ny vy.
Ny jiro UV-C marobe maro dia ahitana rakitsoritra, izay mahatonga ny fanodinana ho mampidi-doza sy manahirana.
Miverena amin'ilay fanontaniana: iza no jiro ultraviolet tsara indrindra? Tsy azo antoka ilay valiny.
Ohatra, afaka mampiasa UVC ao amin'ny toerana voafatotra isika mba hialana amin'ny fahalavoana sy ny fanamafisana azy. Ary afaka mitambatra ihany koa isika amin'ny UV-A photocatalyst sivana mba ho simba sy fanesorana ny sisan-javatra organika amin'ny rivotra.
Ny tena zava-dehibe dia raha azontsika tsara ny mampiavaka azy ireo.
Tandindomin-doza ny olombelona raha sendra jiro ultraviolet izy ireo na dia mandritra ny fotoana kelikely aza. Ny halehiben'ny fahavoazana dia miankina amin'ny fotoana fitrandrahana, ny hamafin'ny halavany ary ny halavan'ny hazavana ultraviolet, ary ny fahatsapan'ny olona.
Ireto misy torolàlana vitsivitsy izay tokony harahina mba hiarovana ny tenanao amin'ny fahazavana ultraviolet.
· Mampiasà sivana, lens, eyewear ary manaova fonon-tanana nampidirin'ny Ophthalmologist.
· Mampiasà làlan-jiro ultraviolet maivana izay mihidy
· Mampiasà rakotra manual na elektronika hanakatona ny andry rehefa tsy ampiasaina ny loharanon-jiro ultraviolet
· Aza mijery mivantana ny fijerin'ny taratra ultraviolet
· Aza atao ny mijery ny faritra ampiasain'ny jiro ultraviolet
· Arovy ny sandrinao sy ny vozonao amin'ny alàlan'ny azy ireo ary mampihena ny fotoana fitobiana
· Asehoy famantarana fampitandremana any amin'ny laboratoara na fidirana amin'ireo faritra mampiasa hazavana ultraviolet
Raha fintinina, ny jiro ultraviolet dia diso tsy takatra ary ampiasaina eo ambany fanadiovana sy ny disinfection. Raha mandray ultraviolet tsara isika dia ho fitaovam-piadiana mahery vaika amin'ny sehatra samihafa.
Related article: Ny mpitari-dalana farany farany amin'ny fividianana UV Lamps anao
Vahaolana vahaolana UVC mahomby ho an'ny Minisplits
Vahaolana UVC mahomby ho an'ny unit HVAC
Taloha: Azo antoka sy azo antoka ve ny jiro Far-UVC (222 nm)?
Next: Fa maninona ireo ankamaroan'ny jiro UV germicidal eo amin'ny tsena dia tsy mahomby?